Onye na-emepụta egwu na-eyi ndi EFCC egwu ịkpọpụ ha ụlọ ikpe | odumblog
Onye na-emepụta egwu na-eyi ndi EFCC egwu ịkpọpụ ha ụlọ ikpe
posted on Jun. 16, 2019 at 5:21 pm
Onye na-emepụta egwu bi n’Abuja nke aha ya bụ Nasiru Ali yiri ndi ‘Economic and Financial Crime Commision’ egwu maka ịkpọ ya ‘Yahoo boy’ ya bụ; onye ji aghụghọ ewere ego ndi mmadu. Ndi ‘News Agency of Nigeria’ (NAN) kwuru na Ali so n’ụmụokorobia iri ndi EFCC nwụchiri dika ndi Yahoo n’ụbọchị iri na asaa nke ọnwa May.
Ndi EFCC wakporo ndi a n’ụlọ na Favour Land Estate, Life Camp, Abuja. Dịka ndi EFCC siri kwuo, ha nwetara ozi a n’aka onye a na-amaghi onye ọ bụ. Ndi a e jidere ka a ga-akpọpụ ụlọ ikpe n’oge na-adighi anya.
Mana Ali degara onyeisi oche EFCC bụ Ibrahim Magu akwụkwọ n’ụbọchị iri atọ na otu n’ọnwa May. Ọ gwara ndi EFCC ka ha kwụọ ya nde nari naira maka ịkpọchi ya na-enweghi ihe o mere na maka imebi aha ya. Ali site n’ọnụ onye ọkaiwu ya bụ Mz. Pelumi Olajengbensi kwuru na ọ ga-akpọpụ ndi EFCC ụlọ ikpe ma ọ bụrụ na ha emeghi ihe o kwuru ka abalị asaa gasịrị.
Ali kwuru na mkpọchị emere ya napụrụ ya ọtụtụ ihe dika: ọrụ nde nari ise ndi ‘United Global Resolve for Peace’ nyere ya, nchụpụ ndi otu ya chụpụrụ ya maka aha ọjọọ a, mmechu ihu o wetaara ndi ezinaụlọ ya, mmekpa ahụ o nyere ya n’ebe nwaanyị ọ chọrọ ịlu nakwa obi mmapụ ọ gabigara. N’ihi ihe ndi a ka o ji chọọ ka EFCC kwụọ ya ụgwọ.
odumblog June 16, 2019
Ọkụ eregbuola mmadu iri na itolu ihe mberede mere n’Ondo
Ndi agha ekwuola na ha gburu ndi Bokom Haram